Indlu yezivakashi entofontofo "Kroondomeinen" - I-Airbnb
Indlu yezivakashi entofontofo "Kroondomeinen"
Uddel, Gelderland, i-Netherlands
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Tjarda
Indlu yezivakashi entofontofo enekamelo lokulala elilodwa, igumbi lokuphumula, ikhishi, indlu yokugezela kanye nethala lakho eliseduze elinendawo enhle kakhulu yokubuka ingadi.
Indawo enhle yehlathi yokuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili hhayi kude kakhulu namadolobha anjenge-Amersfoort, i-Apeldoorn ne-Arnhem.
I-guesthouse ilala abantu abangu-4 emibhedeni emibili engu-2 (phezulu).
Kukhona ikhishi elinakho konke nge-microwave kanye nohhavini, ikamelo lokugezela elineshawa nendlu yangasese kanye negumbi lokuphumula elinendawo yokuhlala enhle enesikrini se-TV ne-DVD player.
Jan 2014: I-Wifi iyatholakala - i-amplifier ifakiwe, i-tv ye-satellite kanye nohhavini kuyasebenza futhi.
Yonke i-guesthouse nethala eliseduze zinikezelwe izivakashi. Imoto ingapakwa emgwaqeni.
Sihlala eduze kwe-guesthouse futhi sizotholakala kuyo yonke imibuzo, amacebiso okuphumula nezindawo ezinhle zokudla.
Le ndawo yinhle kakhulu ukuhamba ngezinyawo kanye nokushova ibhayisikili. Isondelene kakhulu nenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke zehlathi e-Netherlands (Kroondomeinen) kodwa futhi namadolobha anjenge-Amersfoort, i-Arnhem ne-Apeldoorn ayafinyeleleka.
Ipaki elihle lemvelo "De Hoge Veluwe" lingamaminithi angu-20 kuphela (kuhlanganise nomnyuziyamu we-Kröller Müller nengadi yesithombe esiseduze).
Ezinye izindawo ezithakazelisayo yilezi:
- Isigodlo 't Loo e-Apeldoorn esinezindawo ezinhle zobuciko
- I-Apenheul (i-zoo enezinkawu kuphela - ivuliwe enkathini yasehlobo)
- I-Julianatoren (inkundla enkulu yokudlala yezingane efika ku-. Iminyaka engu-12 - ivuliwe enkathini yasehlobo)
- i-Castle Staverden enezingadi ezinhle kakhulu
I-Dolfinarium e-Harderwijk - Ama-saunas amaningana/izikhungo zokwamukela ezifana ne-Zwaluwhoeve,
i-Thermen Bussloo, i-Veluwse Bron ne-Saunadrome - Izindawo zokudlela ezinhle kuhlanganise ne-Echoput (inkanyezi ye-michelin) ngemizuzu engu-10 kuphela.
Isidlo sasekuseni ngeke sinikezwe ngesikhathi esithile kodwa sizotholakala ku-guesthouse kalula kuwe.
Ngaphezu kwalokho, uma uhlala isikhathi eside (iviki eliyi-1), umshini wethu wokuwasha nomshini wokomisa uyatholakala uma kwenzeka kudingeka.
4.53 out of 5 stars from 280 reviews
4.53 · 280 okushiwo abanye
Family with young children, enjoying life outside but also in the city.
Living in quiet forest area with lots of nice wildlife and views, but not too far from city life. Amer…
Sihlala eduze kwe-guesthouse futhi sizotholakala kuyo yonke imibuzo, amacebiso okuzilibazisa nezindawo ezinhle zokudla ngengqungquthela elula emnyango wethu wangemuva. Izingane zethu zithanda ukudlala engadini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Uddel namaphethelo